विचित्र संसार | suryakhabar.com | Page 2
on: ८ भाद्र २०७६, आईतवार २१:१४ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाण्डौ । महिलाहरुले रुचि नराख्दा कण्डम प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दो छ १ खासमा महिलाहरुले किन कण्डम लगाएर यौन सम्पर्क रुचाउँदैनन् ? यो प्रश्नको जवाफ यस्तो छ– –कण्डम प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क...	Read more
चितवन । देवघाटमा अन्त्येष्टिका लागि लगिएको शिशु चल्मलाएपछि पुनः अस्पतालमा फर्काइएको छ । सँगै मृत्यु भएको भनी गाडिएको अर्को शिशुलाई उत्खनन गरी प्रहरीले परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याएको छ...	Read more
on: १० श्रावण २०७६, शुक्रबार १६:३२ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका १६ तल्लो गोष्टेमा बसोबास गर्दै आएका अन्दाजी ५० बर्षिय चतुरे भनिने सुकराम परियारलाई उनकै श्रीमती सिता परियारले दाउले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेकी छन् । गत बुधब...	Read more
on: ३० असार २०७६, सोमबार १०:२१ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाण्डौ । मोरङमा पानी नपरेर भ्यागुताको बिहेगरेपछि पानी आउछ भन्ने विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै बिवाह गरिएका दुई भ्यागुताको सम्बन्ध बिच्छेद गरिएकोछ । केहीदिनदेखी बर्षाले बिराटनगर लगायत देशभर जलम...	Read more
काठमाडौँ । एक सेठ र उनकी धर्मपत्नी हरेक दिन सत्संगमा जाने गर्थे । सेठले एउटा सुगा पालेका थिए, जो पिँजरामा रहन्थ्यो । एक दिन सुगाले सेठसित सोध्यो– सेठजी, तपाईंहरू हरेक दिन कहाँ जानुहुन्छ ? से...	Read more
on: १६ असार २०७६, सोमबार १६:४९ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौं । पछिल्लो समय एक जोडीको बिहे निकै चर्चामा छ । मायामा उमेर हेरिँदैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने यो बिहे ६२ वर्षका वृद्ध र १८ वर्षकी युवतीबीच भएको हो । इण्डोनेसियाको गोवामा बस्ने यी दुई...	Read more
काठमाडौं । साल्भाडोरका बाबु छोरीको तस्वीरले विश्वको ध्यान फेरि एक पटक अमेरिकाको सीमामा बढ्दो आप्रवासी संकटतर्फ तानेको छ । तस्वीरमा अल्बर्टो मार्टिनेज रामिरेज र उनकी छोरी भेनिसा आभालोसको शव घ...	Read more
on: २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:०२ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौँ । भारतकी तमिलनाडुकी मदुरै गाउँमा बस्ने एक महिलाले जीवनभरी विवाह नगर्ने अठोट गरेकी छिन् । ४८ वर्ष भएकी यी महिलाको नाम सेल्भरानी हो । सेल्भरानी नाम गरेकी यी महिला सानै हुदाँ उनको जीवन...	Read more
काठमाडौँ । त्यतिखेर महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा थिए । आफ्नो आन्दोलनका कारण उनले धेरैजसो ब्रिटिस सरकारको दमनको सिकार हुनुपथ्र्यो । तैपनि, उनी धैर्यपूर्वक काममा जुटिरहन्थे । दक्षिण अफ्रिका...	Read more
काठमाडौं । एक व्यक्ति सडकमा दुर्घटनामा पर्छन् । उनले भिडियो कल गरेर श्रीमतीलाई आफ्नो हालत प्रत्यक्ष देखाउँछन् । त्यसपछि अन्तिम सास फेर्छन् । कसैले रचेको कहानी जस्तो लाग्ने यो घटना भारत उत्तर...	Read more
पाकिस्तान । कसैको रिस निकै कडा हुन्छ । ठूलै ताण्डव मच्चाएर भए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू रिस मार्न पछि पर्दैनन् । पाकिस्तानमा एकजना पुरुषलाई आफ्नी श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेपछि पनि रिस मरेन । उनले ड...	Read more
on: १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार ११:३७ In: विचित्र संसारTags: No Comments
एक समय यस्तो थियो, जुन बेला महिला हैन, पुरुषलाई रजस्वला हुने गर्दथ्यो र पुरुषले नै सन्तान जन्माउने गर्दथ्यो । पत्यार लागेन है ? पुराणमा वर्णित कथा अनुसार सृष्टिको आरम्भमा सबै भन्दा पहिले त्र...	Read more
on: १४ चैत्र २०७५, बिहीबार १३:२१ In: विचित्र संसारTags: No Comments
बंगलादेश । २० वर्षीया बंगलादेश एक महिलाले पहिलो सन्तान जन्मेको एक महिलामा जुम्ल्याहा बाच्चलाई जन्म दिएकी छन् । यो संसारकै पहिलो सबै भन्दा दुर्लभ घटना भएको त्यहाँका स्थानीयवासी र चिकित्साहरुल...	Read more
on: २२ पुष २०७५, आईतवार ०७:५८ In: विचित्र संसारTags: No Comments
टोकियो । जापानका एकजना सुसी व्यवसायीले टोकियोमा खुलेको नयाँ माछा बजारमा शनिबार एउटा विशाल टुना माछा ३१ लाख अमेरिकी डलर (३४ करोड ७२) लाख मा खरिद गरेका छन्। जापानमा एउटै माछाको यो अहिलेसम्मकै...	Read more
on: १९ पुष २०७५, बिहीबार ०८:५७ In: विचित्र संसारTags: No Comments
भतरपुर । एक पुरुषले आफ्नै श्रीमतीलाई एसिड प्रहार गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–२९ आदर्शनगर बस्ने ४७ वर्षीय वीरेन गुरूङले ससुरालीमै आएर श्रीमती डोल्मा रूम्बालाई एसिड प्रहार गरेका हुन् । एसिड...	Read more
on: १५ पुष २०७५, आईतवार ०८:३९ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौँ । अमेरिकाको मिसिसिपीमा विश्वको सबैभन्दा सानो गाई छ । जसको वजन जम्मा साढे चार किलो रहेको छ । अर्थात् त्यो गाई जम्माजम्मी बिरालो जत्रै छ । गाईको सानो आकार तथा कम वजनका कारण उसका मालिक...	Read more
on: १३ मंसिर २०७५, बिहीबार ०८:५८ In: विचित्र संसारTags: No Comments
एजेन्सी । ट्वाइलेटमा प्रयोग गरेको पानी केमा प्रयोग होला ? त्यो फोहोर पानी ढलमा मिसिनुको विकल्प के होला र ? भन्नुहोला । तर भारतमा एउटा सरकारी संस्थाले ट्वाइलेटको पानी बेचेर ७८ करोड भारु कमाउ...	Read more
on: १० मंसिर २०७५, सोमबार १४:०५ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौं । विश्‍वमा धेरै कम्पनीले विभिन्‍न आकारमा कार बनाएका छन् । कारहरु विश्‍व बजारमा आफ्नै प्रकारको छाप छोडेको छ। तर संसारमा एउटा यस्तो पनि मानिस छ जसले विश्‍वकै सबैभन्दा लामो कार बनाएका...	Read more
काठमाडौँ । संसारभर बिभिन्न खाले सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । अलग अलग जाति र स्थान विशेषका रुपमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने गर्दछ । नेपालमा पनि बिभिन्न जाति,वर्ग स्थान विशेष सौन्दर्य...	Read more